बुटवलमा नेपालको पहिलो शिक्षण होटल | Ekhabar Nepal
समाज जेठ २१ २०७५ ekhabarnepal
नेपालमै पहिलो प्रयोगको रुपमा रहेको शैक्षिक कार्यक्रमसहितको रिसोर्ट अथवा शिक्षण होटल बुटवलको वडा नं. १५ स्थित ढवाहमा प्रारम्भ भएको छ ।
होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक तहको पढाई हुने प्रदेश न. ५ को पहिलो वेष्टर्न मेघा कलेजले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने नीति अपनाएको छ ।
लिंकन युनिभर्सिटी मलेसियाबाट सम्बन्धन् र त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अनुवन्धित मेघा कलेज बुटवलको वडा नं. १५ स्थित आरम्भ गु्रप अफ हस्पिटालिटी लि.को व्यबस्थापनमा सञ्चालित छ ।
आरम्भ गु्रपले शिक्षण होेटलको अबधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरि सञ्चलन गरेको यो कलेज नेपालकै पहिलो हो, आरम्भ गु्रपका अध्यक्ष बाबुराम महतले भने । होटलमै पढने , होटलमै प्रशिक्षण लिने र अन्तत होटलमै जागिर खाने वा आफै होटल खोली स्वरोजगार सृजना गर्ने कामलाई शिक्षण होटलको रुपमा लिएको छ ।
जुनसुकै बिषयमा दश जोड दुई (१०+२) उत्तीर्ण बिद्यार्थीले यो बिषय अध्ययन गर्न पाउने ब्यवस्था छ, क्याम्पस प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले भने ।
क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेघराज पन्तका अनुसार यस क्याम्पसमा अध्यनरत केही बिद्यार्थीहरु दुवईमा रहेका अन्तर्रष्ट्रिय स्तरका प्रख्यात पाँच तारे होटल दसित थानी, अज्मान शारे, ड्यूक होटल, मेरिएट लगायतमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि पठाइएको छ । रोचक र मनोरञ्जनात्मक शिक्षण बिधिद्धारा अध्यापन गराइने भएकोले यहाँबाट उत्पादित सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरु बजारमा सहजै खपत हुने विश्वास प्राचार्य भट्टराईको छ । आगामी दिनमा अष्ट्रेलिया ,लण्डन ,चीन मलेसिया लगायतका मुलुकहरुमा प्रशिक्षणको लागि पठाउने तयारी पनि भईसकेको छ ।
नेपालको दोश्रो ठूलो पर्यटकीय स्थल लुम्विनी, निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, बुटवलको अन्तराष्ट्रिय सभागृह र प्रदेश न ५ को राजधानी समेतका कारण साना ठूला सयौँ होटलहरु निर्माणधीन अवस्थामा रहेकोले पनि यो जनशक्तिको खपत सहजै हुने भएको हो । हाल उक्त कलेजमा लुम्विनी क्षेत्रका कतिपय होटलले जनशक्ति माग गर्न थालेका छन् । हाम्रो पहिलो ब्याजको बिद्यार्थी रुपन्देही जिल्ला भित्रै खपत हुनेगरि अग्रिम बुक हुन थालेको छ, प्राचार्य भट्टराईले भने । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अनुसार दोश्रो सेमेस्टर पछि बिद्यार्थीहरुले आम्दानी गर्न शुरु गर्छन । गत चार महिनाको बीचमा फुर्सदको समयमा गएर बिद्यार्थीहरुले चार लाँख रुँपिया भन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् ।
टाईगर प्यालेस ,ओलिफ गार्डेन , लक्ष्मी होटल , सिद्वार्थ कटेज ,आम्रपाली लगायतका होटलहरुमा गएर बिद्यार्थीहरुले सशुल्क परिक्षण लिने गरेका छन् । यहांवाट उत्पादित विद्यार्थीहरु पनि अध्ययनवाट सन्तुष्ठ देखिन्छन् । “अध्ययनपश्चात् तुरुन्तै लागू गर्न पाइने ब्यावहारिक शिक्षाको नाम होटल म्यानेजमेण्ट हो”, रुपन्देहीको रुद्रपुरवाट दैनिक कलेजमा आई अध्ययन गर्ने २१ वर्षिय गौरव शर्माले भने । “यो शिक्षाले अनुशासित, कामकाजी र आफूलाई परिस्थिति अनुकुल वनाउन सिकाउंछ”, कपिलवस्तुको वाणगंगाका २३ वर्षिय विद्यार्थी सञ्जिव गैरेको अनुभव छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१२ मा होटल ब्यवसाय गर्ने दिनेश भूसाल आफ्नो छोराको पढाई र आनीवानी तथा आचरणवाट छक्क परेका छन् । पच्चिसौं वर्षदेखि यो ब्यवसायमा संलग्न भूसालको छोरी पनि होटल ब्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर छन् । हाल उनी अमेरिका छन् । कलेजमा भर्ना भएपछि छोरामा असाधारण परिवर्तन आएको वुझाई भूसालको छ, “ऊ जिम्मेवार र लगनशील भएको छ”,भूसालले भने ।
धेरैलाई लाग्छ होटल म्यानेजमेण्ट भनेको होटलका लागि मात्र हो तर यसको क्षेत्र यतिमै सिमित छैन । “एयरवेज र क्रुजमा पनि राम्रो संभावना छ”, दुवैको एउटै भनाई छ । त्यसोत शुरु शुरुमा केही साथीभाई र अभिभावकले पनि होटलमा काम गर्न पनि किन पढ्नु परे होला भनेर कुरा काट्न खोजेका हुन् तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । अभिभावकहरुको चिन्तनमा परिवर्तन आएको छ । मिठो मसिनो खुवाउनेलाई हल्का फुल्का टिप्स दिने चलन नेपालीमा पनि शूरु भएको छ एकातिर भने अर्कोतिर पढेर सर्भिस दिनेहरुको चालचलन र अनुशासन फरक हुने भएकोले त्यस्ता उम्मेदवारहरु सवैको रोजाइमा पर्न थालेका छन् ।